Qondisa ukulanda futhi ukufaka izicelo kwi-Android BlackBerry 10 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Qondisa ukulanda futhi ukufaka izicelo kwi-Android BlackBerry 10
Kusukela ngaleso sikhathi, njengoba wakhululwa BlackBerry 10.2.1, ikhono ukufaka Android-application (Indlela ukufaka Izinhlelo ze-Android (APK) ku 10 BlackBerry) ngaphandle isidingo lokuguqulwa isibe omunye zigqila enkulu kunazo zonke kuya BlackBerry abalandeli. It esavula ithuba izicelo eziningi ngaphambili ayengenawo abanikazi Canadian Smartphones. Kodwa kule ndaba, ziyinkinga entsha ophakamayo kuphi — APK-files?
Ukuxazulula le nkinga, kunezindlela eziningi, kodwa ukuze wengeze lula umsebenzi lokusebenza original Snap wadalwa BlackBerry 10. Snap eqinisweni, interface yomsebenzisi for the Google Play Store, ngakho ungaqiniseka ukuthi amafayela ilandelwe ngokusebenzisa kuphephile kunjalo, ngangokunokwenzeka. Akukho mehluko phakathi ukulanda usebenzisa Thwebula futhi ukulanda ngqo kusuka ku-Google Play Store.
Inkinga nje nge Snap, wukuthi uhlelo ngokwako isicelo, futhi idinga ukufakwa. Nokho, lwanele ukuze awumise once futhi awunayo ukulanda lutho, ngoba onjiniyela baye bathatha yonke izinyathelo ukuqinisekisa ukuthi njengoba umsebenzisi ekupheleni akudingi omningi ukufaka i-APK-amafayela kudivayisi yakho BlackBerry 10.
Uma ufuna ukulanda Snap, ukuze bakwazi ukufaka Android-izicelo ngqo BlackBerry yakho, sikulethela umhlahlandlela wokuthi ngeke nje ukusiza ukulanda Snap, kodwa liphinde libonise nokuthi ungalusebenzisa kanjani ukuyisebenzisa ukuze ukulanda APK-amafayela.
Indlela ukufaka Snap on BlackBerry 10
Thwebula Snap BAR-ifayela ngenguqulo yakamuva ye-Snap kukhompyutha yakho bese ulufaka (Indlela ukufaka isicelo kwi BAR-10 BlackBerry).
Manje ungavala idivayisi yakho yeselula kusuka kwikhompyutha yakho futhi sizobheka setting Snap
Ngemva Snap ezilayishiwe kahle futhi efakwe, asikho esinye isenzo silula kakade. Lapho uvula uhlelo lokusebenza, kuyoba akucele ukuba ngemvume ku-Google, ngoba, njengoba sekuphawuliwe kakade, ngokuyisisekelo, okusebenza njengoba interface yomsebenzisi ku-Google Play Store. Yiqiniso, kudinga ukuba ube yi-Google akhawunti kwanoma yiluphi uhlobo, ngakho uma ungenayo, kufanele ubhalise.